ရေဒါ၌ပျောက်ဆုံးခဲ့သော ထိုင်ဝမ်၏ F-16 တိုက်လေယာဉ်ကိုရှာတွေ့၊ ရေထဲမောင်းချသွားခြင်းသာဖြင့် ( ရေထဲကို မောင်းချသွားတယ်လို့ အဖြေထုတ်လိုက်တော့ လေယာဉ်မူးက လေယာဉ်မောင်းနေရင် ရေကူးချင်လာလို့များလား….) – စှယျစုံသုတ
ရေဒါ၌ပျောက်ဆုံးခဲ့သော ထိုင်ဝမ်၏ F-16 တိုက်လေယာဉ်ကိုရှာတွေ့၊ ရေထဲမောင်းချသွားခြင်းသာဖြင့် ( ရေထဲကို မောင်းချသွားတယ်လို့ အဖြေထုတ်လိုက်တော့ လေယာဉ်မူးက လေယာဉ်မောင်းနေရင် ရေကူးချင်လာလို့များလား….)
နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ညက ထိုင်ဝမ်လေတပ်၏ ရေဒါ၌ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသော အက်ဖ်-၁၆ တိုက်လေယာဉ်ကို ရေအေက်မီတာ အနက် ၁၀၀၀ မှာ ရှာဖွေပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။
အဆိုပါတိုက်လေယာဉ်ကို ထိုင်ဝမ်ကြည်းတပ်ရဲ့ အမှတ်(၅) Mixed Tactical Fighter Wing မှ ဗိုလ်မှူးကြီး Jiang Zhengzhi လို့အမည်ရတဲ့ တိုက်လေယာဉ်မှူးက မောင်းနှင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်နဲ့ဆို ၄ ရက်တာကာလလည်းကြာမြင့်ခဲ့တာပါ။
ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ရဲ့ ရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ နှစ်ရက်ဆက် တိုက်လေယာဉ်ရဲ့ အနက်ရောင်သေတ္တာ (ပျံသန်းမှုအချက်အလက်မှတ်တမ်း) ကနေပြီး အားနည်းတဲ့ FDR Beacon အချက်ပြမှုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဒီ beacon signal ကို flight data recorder မှထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီး၎င်းကို flight data recorder (FDR) လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့အချက်အလက်အပေါ် မူတည်ပြီး Cross positioning လုပ်ပြီးတဲ့နောက် ပျက်ကျတဲ့တိုက်လေယာဉ်ရဲ့ အသေးစိတ်တည်နေရာကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး ရှာဖွေမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှာဖွေမှုမှာ ကယ်ဆယ်ရေးသင်္ဘောနဲ့အတူ Black Hawk ရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့ S-70C ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြတယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။
F-16 တိုက်လေယာဉ်ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တုန်းက အမေရိကန်ကနေ ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ကို ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး ထိုင်ဝမ်မှာ ၂၃ နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ၂၃ နှစ်တာ ၀န်ထမ်းဆောင်စဉ် အတွင်း F-16 တိုက်လေယာဉ် ၈ စီးပျက်ကျခဲ့ပြီး လေယာဉ်မှူး ၈ ဦး စလုံးလည်း သေဆုံးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
ယခုပျက်ကျခဲ့တဲ့ အက်ဖ်-၁၆ တိုက်လေယာဉ်ဟာ Hualien ဆိပ်ကမ်းမှ ရေမိုင် ၈ မိုင်အကွာမှာ ပျက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရေဒါမှတ်တမ်းတွေအရ တိမ်တွေကြားထဲ ပျံသန်းရင်း ပင်လယ်ထဲ ရုတ်တရက်ပျက်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တိုက်လေယာဉ်မှူးအနေနဲ့ အရေးပေါ် ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှု မပြုလုပ်ခဲ့သလို ခုန်ထွက်မှုလည်း မပြုလုပ်ခဲ့တာဟာလည်း သတိပြုမိ စရာဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး Jiang Zhengzhi ဟာ အသက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းပျံသန်းချိန် ၂,၂၃၀ ကျော်ရှိတဲ့ တကယ့်ဝါရင့်တိုက်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးပါ။
ထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ တိုက်လေယာဉ်မှူးအတွက် ရာသီဉတုဆိုးရွားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာက ရေထုထဲကို မောင်းချသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ အက်ဖ်-၁၆ မှာတော့ တိုက်လေယာဉ်ရဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ Black Box ကပြသထားပါတယ်။
ပျံသန်းမှုလမ်းကြောင်းအရ တိုက်လေယာဉ်မှူးအနေနဲ့ ပေ ၂၁၀၀ အတွင်း ပျံသန်းလေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်း စက္က့န် ၂၀ အတွင်း ရုတ်ခြည်းဆိုသလို ၀ မီတာအထိကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်လို့ BX က ပြသထားပါတယ်။
ရဒေါ၌ပြောကျဆုံးခဲ့သော ထိုငျဝမျ၏ F-16 တိုကျလယောဉျကိုရှာတှေ့၊ ရထေဲမောငျးခသြှားခွငျးသာဖွငျ့
နိုဝငျဘာလ ၁၇ ရကျနညေ့က ထိုငျဝမျလတေပျ၏ ရဒေါ၌ ပြောကျဆုံးခဲ့ရသော အကျဖျ-၁၆ တိုကျလယောဉျကို ရအေကျေမီတာ အနကျ ၁၀၀၀ မှာ ရှာဖှပွေနျလညျတှရှေိ့ခဲ့ပါပွီ။
အဆိုပါတိုကျလယောဉျကို ထိုငျဝမျကွညျးတပျရဲ့ အမှတျ(၅) Mixed Tactical Fighter Wing မှ ဗိုလျမှူးကွီး Jiang Zhengzhi လို့အမညျရတဲ့ တိုကျလယောဉျမှူးက မောငျးနှငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ စတငျဖွဈပှားခြိနျနဲ့ဆို ၄ ရကျတာကာလလညျးကွာမွငျ့ခဲ့တာပါ။
ထိုငျဝမျစဈတပျရဲ့ ရှာဖှရေေးနှငျ့ကယျဆယျရေးတပျဖှဲ့တှဟော နှဈရကျဆကျ တိုကျလယောဉျရဲ့ အနကျရောငျသတ်ေတာ (ပြံသနျးမှုအခကျြအလကျမှတျတမျး) ကနပွေီး အားနညျးတဲ့ FDR Beacon အခကျြပွမှုကိုရရှိခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
ဒီ beacon signal ကို flight data recorder မှထုတျပေးတာဖွဈပွီး၎င်းငျးကို flight data recorder (FDR) လို့လညျးချေါပါတယျ။ ရရှိလာတဲ့အခကျြအလကျအပျေါ မူတညျပွီး Cross positioning လုပျပွီးတဲ့နောကျ ပကျြကတြဲ့တိုကျလယောဉျရဲ့ အသေးစိတျတညျနရောကို အတညျပွုခဲ့ပွီး ရှာဖှမှေုတှေ လုပျဆောငျခဲ့ကွတာလညျးဖွဈပါတယျ။
F-16 တိုကျလယောဉျကို ၁၉၉၀ ပွညျ့နှဈတုနျးက အမရေိကနျကနေ ထိုငျဝမျစဈတပျကို ရောငျးခပြေးခဲ့ပွီး ထိုငျဝမျမှာ ၂၃ နှဈကွာတာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ပွီးလညျးဖွဈပါတယျ။
သို့သျော ၂၃ နှဈတာ ဝနျထမျးဆောငျစဉျ အတှငျး F-16 တိုကျလယောဉျ ၈ စီးပကျြကခြဲ့ပွီး လယောဉျမှူး ၈ ဦး စလုံးလညျး သဆေုံးခဲ့ရပွနျပါတယျ။
ယခုပကျြကခြဲ့တဲ့ အကျဖျ-၁၆ တိုကျလယောဉျဟာ Hualien ဆိပျကမျးမှ ရမေိုငျ ၈ မိုငျအကှာမှာ ပကျြကခြဲ့တာဖွဈပွီး ရဒေါမှတျတမျးတှအေရ တိမျတှကွေားထဲ ပြံသနျးရငျး ပငျလယျထဲ ရုတျတရကျပကျြကခြဲ့တာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။
တိုကျလယောဉျမှူးအနနေဲ့ အရေးပျေါ ရဒေီယိုဆကျသှယျမှု မပွုလုပျခဲ့သလို ခုနျထှကျမှုလညျး မပွုလုပျခဲ့တာဟာလညျး သတိပွုမိ စရာဖွဈပါတယျ။
တိုကျလယောဉျမှူးတဈဦးဖွဈတဲ့ ဗိုလျမှူးကွီး Jiang Zhengzhi ဟာ အသကျ ၄၄ နှဈရှိပွီဖွဈပွီး စုစုပေါငျးပြံသနျးခြိနျ ၂,၂၃၀ ကြျောရှိတဲ့ တကယျ့ဝါရငျ့တိုကျလယောဉျမှူးတဈဦးပါ။
ထိုငျဝမျစဈတပျကတော့ ဒီဖွဈစဉျဟာ တိုကျလယောဉျမှူးအတှကျ ရာသီဉတုဆိုးရှားနတေဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ ထငျယောငျထငျမှားဖွဈခဲ့ပုံရတယျလို့ သုံးသပျထားကွပါတယျ။
ဆိုလိုခငျြတာက ရထေုထဲကို မောငျးခသြှားတဲ့ ပုံစံမြိုးပါ။ အကျဖျ-၁၆ မှာတော့ တိုကျလယောဉျရဲ့ စကျပိုငျးဆိုငျရာ ခြို့ယှငျးမှုဖွဈပျေါခဲ့ခွငျးမရှိဘူးလို့ Black Box ကပွသထားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီလိုထငျယောငျထငျမှားဖွဈစဉျမြိုးဟာ ပထမဆုံးတော့ မဟုတျပါဘူး၊ ဂပြနျ Air Self-Defense Force က အကျဖျ-၃၅အေ စတဲ့လျ တိုကျလယောဉျဟာလညျး ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာအတှငျးမှာ အဆိုပါဖွဈစဉျမြိုး ကွောငျ့ပကျြကမြှုမြိုးဖွဈခဲ့ပါသေးတယျ။
ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပေါ့ဆပြီး လူမပီသတဲ့သူတွေကို မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံအုပ်ကြီးပြောပြီ
အသက် ၇၅ နှစ်အရွယ် ပြောင်းဖူးပြုတ်ရောင်းနေတဲ့ အဖွားတစ်ယောက်ရဲ့ သနားစရာဘ၀လေး